Missing Pieces: Dragon Age: Origins (PC) Review
ဂိမ်းကစားတာကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ ဂိမ်းအကြောင်းလဲပြောပါမယ်။ Review ပေါ့။
ပထမဆုံးစပြောမယ့် ဂိမ်းက Dragon Age: Origins ဆိုတဲ့ဂိမ်းပါ။ Role-Playing Game (RPG) ဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
Xbox, PS3 နဲ့ PC တွေမှာ ကစားလို့ရပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ PC မှာကစားဖူးတဲ့အတွက် PC ထဲက အတွေ့အကြုံကိုပြောပြပါမယ်။
ဂိမ်းရဲ့ နောက်ခံဇာတ်လမ်းက ရှေးခေတ် နဂါးတွေ၊ သူရဲကောင်းတွေ၊ ရဲတိုက်တွေခေတ်ကို အခြေခံထားပါတယ်။ အဲဒီခေတ်မှာ Darkspawn လို့ခေါ်တဲ့ မိစ္ဆာတွေ ကျူးကျော်မှု ခံနေရချိန်ပါ။ Human, Elf နဲ့ Dwarf ဆိုပြီး Race သုံးမျိုးရှိပါတယ်။ Race တွေမှာလည်း warrior ၊ mage rogue ၊ အစရှိတဲ့ အဆင့်တွေပါပါတယ်။ ကိုယ်ရွေးချယ်တဲ့ အဆင့်ပေါ်မူတည်ပြီး ကစားရတဲ့ Plot နည်းနည်းကွာပါတယ်။
ဒီဂိမ်းမှာ စစချင်း Character တစ်ကောင်တည်းစကိုင်ရပါတယ်။ သူနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ Quest တွေလိုက်လုပ်ပြီး နောက်ပိုင်းရောက်လာရင် Character အသစ်တွေပါပါလာပါတယ်။ Character အသစ်တွေရလာရင် ကိုယ့်အဖွဲ့မှာ လူလေးယောက်အထိရွေးထည့်ပြီးကစားလို့ရပါတယ်။ Quest တွေလိုက်လုပ်ရပါတယ်။ ဂိမ်းထဲမှာ တွေ့တဲ့ Computer Character တွေနဲ့ စကားပြောဆက်ဆံရပါတယ်။ သူတို့ကို တုန့်ပြန်ပြောလိုက်တဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ စကားရွေးချယ်မှုပေါ်မူတည်ပြီး ဇာတ်လမ်းနဲ့ ဂိမ်းပလေး ပြောင်းနိုင်ပါတယ်။ တစ်ခါကစားပြီးလို့ နောက်တစ်ခါကစားရင် မရိုးတော့ပါဘူး၊ ဇာတ်လမ်းလွဲအောင်လုပ်လို့ရလို့ပါ။
တကယ်တော့ ဒီဂိမ်းက World of Warcraft နဲ့ နည်းနည်းဆင်ပါတယ်။ ဂိမ်းရဲ့ဇာတ်လမ်းရော Gameplay ရော Control ပါ အကုန်ကောင်းတဲ့ ဂိမ်းတစ်ခုပါ။
၂၀၀၉ ခုနှစ်ထွက်ခဲ့တဲ့ PC Game တွေထဲမှာ Critics တော်တော်များများက အကောင်းဆုံးဂိမ်းလို့သတ်မှတ်ခံရတဲ့ ဂိမ်းပါ။
ကစားချင်လို့ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ရင် အောက်က rapidshare လင့်ခ်ကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်လို့ရပါတယ်။ Rapidshare ရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပိုအဆင်ပြေမှာပါ။
နောင်အားရင် ကစားလို့ကောင်းတဲ့ ဂိမ်းလေးတွေအကြောင်းထပ်ပြောပြပါဦးမယ်
Brought to you by နေတိုက်ရှိန်း at 12:23 PM
Cho Mar January 22, 2010 at 9:51 PM
i dun have rapidshare..n nt intending to buy it :P
find me another link :)
btw, i've been playing sims3 and askin my bf dl sims3 WA :D
နေတိုက်ရှိန်း January 23, 2010 at 12:47 AM
I've played Sims3World Adventure. It's quite good. It's really hard to download games without rapidshare account. I suggest u buy together with other people ... it's worth it .. really worth it ... you can download any movies or music or games or ebook or ... etc if you hav rapidshare account ...